Posted by Tranquillus | Mar 21, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xirfad ahaan ahaan, waxaad ku qasban tahay inaad barato farsamooyinka qorista. Ujeedada ayaa ah in fariintaada la gaarsiiyo. Xaqiiqdii, qorista shaqadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isgaarsiinta shirkadda ama hay'ad kale. Mid ka mid ah farsamooyinka ugu fiican ee lagu ogaan karo haddii yoolkaaga la gaari doono ayaa ah inaad naftaada gasho kabaha akhristaha. Nidaamkani wuxuu hubiyaa in qofka qaata uusan ka maqnaan wax muhiim ah. Ugu dambeyntiina, fikradda ayaa ah inaad naftaada u sheegto inaad si fiican wax u qortid haddii aad ogtahay sida qofka qaata uu u aqrin doono dukumintiga.
Xeeladaha akhris ee kala duwan
Maskaxda aadamuhu waxay leedahay awood weyn oo la-qabsasho, taas oo ah tan ka dhigaysa akhristaha mihnadda leh inuu la qabsado iyadoo loo eegayo nooca dukumiintiga uu ku haysto hortiisa. Sidaa darteed, akhrisku wuxuu noqon karaa mid buuxa ama qayb ah.
Xaaladda kowaad, waxaa aad uga muhiimsan in fiiro gaar ah loo yeesho faahfaahinta oo dhan maxaa yeelay akhristaha ayaa u aqrin doona ereyba erey. Taasi waa macluumaad badan oo maskaxda ah, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad ahaato mid fudud sida ugu macquulsan si aadan u daalin akhristahaaga. Arrinta labaad, akhristuhu wuxuu soo xulayaa macluumaad uu u arko inuu yahay mid muhiim ah waana tan ka dhigaysa kala sarreynta qoraallada mid weyn.
Xaaladaha badankood, qeyb aqrinta waxaa loo adeegsadaa goobta shaqada maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah ma haystaan ​​waqti ay ku akhriyaan dhammaan dukumiintiyada bilow ilaa dhammaad. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la dejiyo istiraatiijiyad muhiim ah oo looga jawaabayo akhriska xirfadeed.
Xeeladaha akhristayaasha xirfadleyda ah
Waxaa jira xeelado akhris oo badanaa ay isticmaalaan akhristayaal xirfadlayaal ah. Marka, qof kasta oo soo saara qorista shaqada waa inuu dhexgeliyaa si uu u gaaro himilooyinkiisa. Kuwani waa xeelado kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh wax u akhrido. Kuwani inta badan waa farsamada goobidda iyo farsamaynta skimming.
Akhrinta iyadoo la tixraacayo
Akhriska tilmaantu waa aqrin cilmi baaris qayb ah. Waxay ku saabsan tahay u socoshada sidii sahamiyaha oo si fiican u garanaya waxa uu raadinayo. Sidaa darteed akhristaha ayaa ku baaraya dhammaan qoraalka jalleec iyo qaab taagan. Sawirkaan wuxuu ku haboon yahay qoraalada tiirarka sida joornaalada, joornaalada, iwm.
Wax aqrin ku sameynta
Akhrinta iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyadda skimming waxay kor u qaadeysaa xaaqitaan muuqaal ah Ujeeddadu waa in la helo macluumaad waxtar leh. Sidaa darteed, isha ayaa ka baareysa bidix ilaa midig si loo helo ereyo muhiim ah si loo fahmo sawirka qoraalka. Marar badan waa xaaqis zigzag ah. Ku dhejinta ereyada muhiimka ah geesinimo wax badan ayey kaa caawin kartaa. Runtii, weyn iyo geesinimo ayaa akhristaha ku hagi doona ereyada muhiimka ah ee qoraalka.
Intaas waxaa sii dheer, ereyga muhiimka ahi wuxuu noqon karaa xukun kala-guur ah, isku-dubbarid isuduwid, xarakayn, khad cusub iyo sidoo kale noocyada muujinta qaarkood.
Ugu dambeyntiina, akhristaha kuma koobna goobta oo keliya maxaa yeelay isagu wuxuu ku tiirsan yahay inuu si buuxda u akhriyo qodobbada uu muhiimka u arko.
Qorista farsamooyinka iyo hababka akhriska 23-kii Maarso, 2021Tranquillus
horeJoojinta heshiiska heshiiska heshiiska ee heshiiska labada dhinac: sababta ma khusayso
socdaLiistada liistada leh iyo akhrinta
Sida loo qoro si wax ku ool ah shaqada?